APMF: tsy nisy ny loza nandritra ny « Festival des baleines » | NewsMada
APMF: tsy nisy ny loza nandritra ny « Festival des baleines »
Ny 12 hatramin’ny 15 jolay teo ny « Festival des baleines » natao tany amin’ny Nosy Sainte Marie, andiany fahefatra. Nandray anjara betsaka tamin’izany ny APMF (Agence portuaire maritime et fluviale), niantoka ny fisorohana ny loza eo amin’ny fitaterana an-dranomasina ary efa misahana izany hatramin’izay, miala eo Mahambo, eo Soanierana Ivongo, na ao Antsiraka mankany Sainte Marie, mandroso sy miverina.
Tsy nisy ny loza nitranga nandritra ny « Festival des baleines » farany teo, araka ny fepetra nampiharin’ny APMF, raha ny fanazavana nentin’ny manambonihatra tantsambo, Randrianasolo Jean Charles, ao amin’ny APMF. « Ankoatra ireo efa miasa aty an-toerana, mbola nanampy azy ireo izahay ho fisorohana ny loza fitaterana an-dranomasina, na fiatrehana ny loza raha sanatria misy », hoy Randrianasolo Jean Charles.
Fantarina voalohany indrindra amin’ny fiantohana ny fitaterana ny famantarana ny toetr’andro. Miankina amin’izay ny fanomezan-dalana ny fiaingan’ny sambo. « Tsy mahazo miainga mihitsy ny sambo raha mihoatra ny roa metatra ny onja ary mahery ny rivotra. Hamarinina mialoha daholo ny fepetra: fantarina ny milina raha mihodina tsara ; jerena raha misy ny milina mitroka rano raha sanatria rendrika ny sambo sy izay rehetra fiarovana toy ny gilet ho an’ny mpandeha », hoy Randrianasolo Jean Charles.
Zahana ihany koa ny antontan-taratasy rehetra momba ilay sambo. “Satria ny sambon’ny APMF no mpanavotra, arovana voalohany ny mpandeha. Noho izany, tsy maintsy fantarina tsirairay ny mpandeha mialoha ny fidirana ao anatin’ny sambo”, hoy ihany Randrianasolo Jean Charles. Betsaka ny mpandeha nandritra ireo fotoana ireo ka tsy maintsy nandraisan’ny APMF fepetra hentitra.